बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुभएको छ ? एक अध्ययनले यसो भन्छ ! - ramechhapkhabar.com
बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुभएको छ ? एक अध्ययनले यसो भन्छ !
छिट्टै उर्जा प्रदान गर्ने फलको रुपमा चिनिने केराले तपाईलाई स्वस्थ्य मात्रै राख्दैन, केही जटिल प्रकारका रो’गबाट पनि बचाउँछ । पूर्ण रुपमा पाकेको केरा ले तपाईको शरीरलाई धेरै प्रकारका रो’गबाट बचाउँछ । पूर्ण रुपमा पाकेको केराको बोक्रामा केही काला दाग देखिन्छन् ।
– बोक्रामा कालो दाग हुने गरेको पाकेको केरा खाँदा तपाई क्यान्सर रो’गबाट बच्न सक्नुहुन्छ । जापानमा गरिएको एक अध्ययनले यो तथ्य पत्ता लागेको हो । पूर्ण रुपमा पाकेको केरा, जसको बोक्रमा कालो दाग हुन्छ, टीएनएफ नाक तत्वले भरिपूर्ण हुन्छ ।
उक्त तत्वलाई ट्यूमर नेक्रोसिस फेक्टर पनि भनिन्छ । यो तत्वले शरीमा क्यान्सर उत्पादन गर्ने ब्याक्टेरियासँग लड्छ । – केरा पाकेसँगै त्यसमा एन्टी–अक्सीडेन्ट तत्वको स्तर पनि बढेर जान्छ । यो तत्वले तपाईको प्रतिरक्षा तन्त्रलाई अधिक बलियो बनाउँछ ।
यो तत्वले सेता रक्तकोष निर्माणमा पनि योगदान पुर्याउँछ । – बोक्रामा कालो दाग देखिने गरी पाकेको केरामा प्राकृति शर्कराको मात्रा धेरै हुन्छ । यसले रगतमा शर्कराको मात्रालाई बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । यद्यपि मधुमेह रोगबाट पी’डित व्यक्तिले भने यो केरा खाँदा होस पुर्याउनु पर्छ ।
(श्रोत : सत्य कुरा)